ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ? झुक्किएर पनि नखानुस् यी ७ खानेकुरा ज्यानै जान सक्छ..आजै बाट ख्याल गर्नुहोस (भिडियो) - Mitho Khabar
October 20, 2020 mithokhabarLeaveaComment on ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ? झुक्किएर पनि नखानुस् यी ७ खानेकुरा ज्यानै जान सक्छ..आजै बाट ख्याल गर्नुहोस (भिडियो)
काठमाडौं:-ग्यास्ट्रि भनेको एस्तो चिज हो जुन कसै लाई छाड्दैन भनिन्छ ७५% नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक छ । खानपान गर्ने तरिका नमिल्दा ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्छ । ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सुन्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ । यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भरिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नपच्ने, लामो समय नखाँदा पेट पोल्ने, खान मन नलाग्ने, ढ्याउ आइरहनेलगायत समस्या हुन्छन् ।
यसले पाचन प्रणालीमा पनि बाधा उत्पन्न गराउँछ । जसले गर्दा शरीरमा रगत, क्याल्सियमलगायत कमी हुन जान्छ । यसको समयमै उपचार नगरेमा पेटको अल्सर र क्यान्सर नै हुन सक्छ । त्यसैले ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।यदि तपाइलाई पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ।
भने भुलेर पनि यी खानेकुरा नखानुहोला ग्यास्ट्राइटिस भएकाले एसिडिक खानेकुराको प्रयोग गर्नुहुँदैन । जसमा कागती, सुन्तला, निबुवा, भोगटे आदि फल पर्छन् । यस्तो समस्या भएकालाई टमाटरले पनि धेरै असर पु-याउँछ ।खान पिन मा कन्टोल गरियन भने यो रोग ले कसैलाई रकहिले छड्दैन खानपिन लाई आफुले कन्टोल गर्नुहोस् आफै बिस्तारै निको हुदै जान्छ ।हेर्नुस् 👇️यो भिडियो सहित
कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार क–कसले पाउँछन् ?
ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या डेढ लाख नाघ्यो
सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो प्याजको मुल्य हेर्नुहोस
डार्क सर्कल बस्यो ? यसरी हटाउनुस्
January 27, 2020 January 27, 2020 mithokhabar
April 5, 2022 mithokhabar